Kubanjwe inhlokokhono yozime eCity Hall | News24
Kubanjwe inhlokokhono yozime eCity Hall
PHOTO: lethiwe makhanyaKubanjwe inhlolokhono yozime eCity Hall.
SEKUQALILE ukulungiselela uzime owaziwa ngokuthi i-Face of SA High Schools njengoba kubanjwe inhlolokhono yokuqala yokukhetha izintokazi ezinoncintisana kulozime mhla zingama-29 Nhlangulana (June) kuwona lonyaka.
Lo zime usungulwe inhlangano engenzi nzuzo i-Dream Leaders Foundation kanti kuhloswe ngawo ukukhuthaza kanye nokuthuthukisa intsha esesesikoleni endimeni yezokumodela.
Inhlolokhono yaseMgungundlovu ibanjwe ngoMgqibelo mhla ziyisishiyagalolunye kuNdasa (March) e-City Hall.
Ngokusho komunye wabahleli balo mcimbi uMnu Clive Hadebe uthe njengoba sebeqalile ukwenza inhlolokhono eMgungundlovu sebezodlulela kwezinye izindawo kodwa wakuqinisekisa ukuthi owamanqamu uzoba khona eMgungundlovu .
“Njengoba kuzophela inyanga kaNdasa sizoya endaweni yase-Dundee, siphinde sidlulele e-Cape Town kanye naseGoli ukuyothola izintokazi ezizobanga lesi sicoco.
“Inhloso yethu enkulu ukuthi sikwazi ukunikeza izingane ithuba lokuthi bakwazi ukukhula kule ndima.Ngaphandle kwaloko sizobe sesibakhulisa thina sibafundisa nangezinto ezehlukene mayelana nendima yezokumodela,” kubeka yena.
Uthe abantu abaphumelele kulenhlolokhono bebengakamenyezelwa okwamnaje kodwa wathi bazokwaziwa ngemiqhafazo bonke labo abazodlulela esigabeni esilandelayo nokungumncintiswano wamanqamu.